Blog – Baydin
December 18, 2019 Daw Thazin Htun 0
စဉ့်အိုးစဉ့်ခွက်ထဲတွင် ဆန်ထည့်ပါ။ စကြာ စိုက်ပါ။ တနင်္ဂနွေနံ ကုန်ပစ္စည်းရောင်းလျင် ရဲယိုသား လက်တစ်ဆစ်ကို ဆန်ထဲ ထည့်ပါ။ တနင်္လာနံ ကုန်ပစ္စည်းများကို ရောင်းလျင် မာလကာသား လက်တစ်ဆစ်ကို ဆန်ထဲထည့်ပါ။ အင်္ဂါနံပစ္စည်းရောင်းလျင် သရက်သား လက်တစ်ဆစ်ကို ဆန်ထဲထည့်ပါ။ ဗုဒ္ဓဟူးနံ ပစ္စည်းရောင်းလျင် ထန်းသား လက်တစ်ဆစ်ကို ဆန်ထဲထည့်ပါ။ ကြာသာပတေးနံပစ္စည်း ရောင်းလျင် အုန်းသားလက်တစ်ဆစ်ကို ဆန်ထဲထည့်ပါ။ သောကြာနံ ပစ္စည်းရောင်းလျင် ငုသား လက်တစ်ဆစ်ကို ဆန်ထဲထည့်ပါ။ စနေနံ […]
December 8, 2019 Daw Thazin Htun 0
အရေးကြီးသော ကိစ္စ တစ်ခု မေးမြန်းလိုလျှင် အောက်ပါ ဇယားကွက်နှင့်မေးမြန်းပါ။ တစ်ကြိမ်မေးလျင် မိမိအရေးအကြီးဆုံး မေးခွန်း တစ်ခုသာ မေးပါ။ မေးပြီးနောက် 24နာရီအတွင်း ဇယားကွက်ကို ထပ်မမေးရပါ။မေးမြန်းလိုလျင် ကိုယ်လက်သန့်စင်ပါ။ ဇယားကို စက္ကူ ဖြူ အလွတ်တစ်ရွက်တွင် ကူးဆွဲပါ။ နမော အောင်ပြီဟု ၉ခေါက်ရွတ်ပါ။ ခဲတံ သို့မဟုတ် ဘောပင်ဖြင့် ဇယားကွက်ကို ထောက်ပါ။ ဇယားကွက်ထောက်နေစဉ် မိမိသိလိုသော မေးခွန်းကို မျက်စိမှိတ် အာရုံ ပြုပါ။ […]
November 15, 2019 Daw Thazin Htun 0
တနင်္ဂနွေ သားသမီးသည် မေမြို့ပန်း ၅ပွင့် မုန့်လုံးရေပေါ် ၄၅လုံးကို တနင်္လာနေ့ နံနက် ၁၀နာရီတွင် ဘုရားလှူပါ။ တနင်္လာ သားသမီးသည် ရွက်လှ ၁၂ညွန့်နှင့် မုန့်လုံးရေပေါ်. ၃၄လုံးကို အင်္ဂါနေ့ နံနက် ၈နာရီတွင် ဘုရားလှူပါ။ အင်္ဂါသားသမီးသည် သပြေ ၉ညွန့်နှင့် မုန့်လုံးရေပေါ် ၂၆လုံးကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက် ၆နာရီ ၄၅မိနစ်တွင် ဘုရားလှူပါ။ ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးသည် ကံ့ကော် ၅ညွန့်နှင့် မုန့်လုံးရေပေါ် […]
November 11, 2019 Daw Thazin Htun 0
မိမိသည် မခံမရပ်နိုင်လောက်အောင် ကံနိမ့်နေခြင်း စီးပွားရေး အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေး လူမှုရေး များအဆင်မပြေခြင်းဖြစ်နေပါက. အညံဂြိုလ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၁. ဘုရားတစ်ဆူသို့သွား၍ မိမိမွေးနံဂြိုလ်တိုင်ကို သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ။ပန်းအနွမ်းများစွန့်ခြင်း ပန်းအသစ်များ ကပ်လှူခြင်း ရေသပ္ပါယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပါ။ ၂. ယခု ဖော်ပြထားသော ဂါထာတော်ကို ၄၅ခေါက်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါ။ ” အလိုတော်ပြည့် ဂါထာ” (အလိုတော်ပြည့် မဟာ ဗုဒ္ဓေါ ဒေဝမနုဿ ပုဇိတော၊ သောရဟော ပစ္စယာဒိနံ၊ မဟာလာဘံ ကရောတုမေ၊ မဟာဓနံ […]
ရေကုန်ရေခန်း အောင်အိုးသပြေပန်း အစီအရင် ?
October 31, 2019 Daw Thazin Htun 0
လူတစ်ယောက်သည် စုံဂဏန်းကျသောနှစ်တွင် ကံညံ့တတ်သလို ဆယ်ပြည့်နှစ်(ဥပမာ ၂၀ ၃၀) စသောနှစ်များတွင်လည်း ကံအလွန်ညံ့ ပြီး လုပ်သမျှ အဆင်မပြေခြင်း ကျန်းမာရေး မကောင်းခြင်းများ ဖြစ်တတ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းကို စန်းပြတ်ခြင်း ဟုခေါ်သည်။ စန်းပြတ် လာဘ်ပြတ်ခြင်းများအတွက် အောင်အိုးကပ် အစီအရင် မည်သည့်နေ့သားသမီးမဆို တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက် ၆နာရီ ၄၅တွင် ရွှေရောင်အောင်အိုးတစ်လုံးအတွင်း ရေအပြည့်ဖြည့်ပြီး သပြေ ၉ညွန့်ထိုးပါ။ အမြင့်တစ်နေရာတွင်ထားပါ ။ ရေမလဲရ အညွန့်များ အသစ်မလဲရပါ။ […]
မိမိမွေးနေ့( ဥပမာ တနင်္လာသားသမီးဆိုလျင် တနင်္လာနေ့)မှစပါ ည ၉နာရီတွင် ဘုရားကို သောက်တော်ရေ ၃ခွက် ဖယောင်းတိုင် ၃တိုင်နှင့် ငွေ ၁ရာ သို့မဟုတ်၁ထောင် လှူပါ ပဌာန်း ၂၄ပစ္စည်းကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါ (အကျဉ်းဖြစ်စေ အကျယ်ဖြစ်စေ မိမိအဆင်ပြေရာရွတ်ပါ) ထိုကဲ့သို ၉ညဆက်တိုက်လှူပါ ပူဇော်ပါ ၉ရက်ပြည့်ပြီး နောက်တစ်နေ့တွင် လှူထားသော ငွေ ၉ရာ သို့မဟုတ် ၉ထောင်ကို ဘုရားတစ်ဆူသို့သွားပြီး လှူဒါန်းပါ။ လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေပြီး […]